३३ किलो सुन लुटिएको हो त ? यस्तो छ सनमकी गर्लफ्रेण्ड निशाको बयान | Alagdhar
घरBanner News३३ किलो सुन लुटिएको हो त ? यस्तो छ सनमकी गर्लफ्रेण्ड निशाको...
३३ किलो सुन लुटिएको हो त ? यस्तो छ सनमकी गर्लफ्रेण्ड निशाको बयान
मेरो गत २८ साउनमा पटक दबारमार्गस्थित आइ क्लबमा सनम शाक्यसँग चिनजान भएको थियो । त्यहाँ म मोडलिङ गर्न गएको थिएँ । उनीसँग चिजान हुँदा सनम शाक्यका साथी मोहन लगायत ४/५ जना थिए । त्यो दिन उसले मेरो फोन नम्बर मागेर लगेका थियो । त्यस समयपछि उनी र मेरो फोन तथा म्यासेजमा कुरा हुन थाल्यो ।
त्यसपछि पार्टी सकेर हामीहरु सबै ठमेलको फेसेस लन्ज एण्ड बार (क्लब) मा गयौं । त्यहाँ जुस खाएर बसी रहेको समयमा मेरो मोबाइलमा सनमले भिडियो कल गरेको थियो । र, म साथीहरुबाट छुटेर तल झरेर सनमसँग कुरा गर्न थालेँ । त्यो क्रममा पार्टीमा निम्त्याइएका साथीहरु मध्ये रमेश श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ र आकाश लामा बीचमा छुट्टै कुराकानी भएको रहेछ ।
उनीहरुको प्लान सफल हुनुभन्दा अगाडी सञ्जेलले यो कुराहरु गोरेसँग पु¥याएको थियो । त्योसँगै मेरो केही तस्विरहरु पनि सञ्जेलमार्फत सनमको गर्लफ्रेन्ड भनेर गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीलाई तस्विरहरु पठाएको कुरा मलाई सनमले भनेका थिए ।
उसले नै मलाई सम्पर्क गर्न खोज्थ्यो । तर, उसको फोन पनि उठाउँदिन थिएँ । तर, पछि मेरो र सनम को ध्जबतकब्उउ मा कुराकानी भयो ।
यस्तैमा सनम जनवरी २३, २०१८ मा बुद्ध एयरबाट बेलुकी ५ः३५ मा टिकट नं.७०५०३९४ बाट काठमाडौं आएको थियो ।
सोही राति अन्दाजी १०/११ बजेको बीचमा सनमको मोबाइलमा फोन आएको थियो । सामान लुटियो भनी गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीले भनेका थिए ।
त्यसपछी सनमलाई मोहनले फोन गरेकाले सनमले म काठमाडौंमा छु भनेका थिए । त्यसपछि मोहनलाई मात्र सनम काठमाडौं आएको कुरा त्यस समयमा थाहा भएको थियो । सोको भोलिपल्ट बिहान म कलेज गएँ । सनम मोहनलाई भेट्न गएका थिए ।
अघिल्लो लेखमासांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच विवाद
अर्को लेखमामोदीको मुक्तिनाथ दर्शनका लागि अन्नपूर्ण पदमार्ग ३ दिन बन्द हुने